Gaas oo waddo 2-aad oo laami ah ka furay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas oo waddo 2-aad oo laami ah ka furay Garowe
A warsame 29 March 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo Axad ah xarriga ka jarey waddo laami ah oo dhererkeedu yahay 2km Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Waddada ayaa lagu magacaabaa Jidka 30-ka.
Wasiiro katirsan xukuumada Puntland, Isimo, Waxgarad, Haween-ka, dhalinyaro iyo qaar kamid ah dadweynaha ku nool xaafadaha ay ka koobantahay magaalada Garoowe ayaa ka soo qeyb-galay xafladda xariga looga jarayey wadadaa cusub ee laamiga ah.
Madaxweynaha Puntland Dr. Gaas ayaa markii uu xariga kajaray kadib sheegay in wax lagu farxo ay tahay in maanta uu xariga kajaray wadadaan oo uu dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2014 uu dhagax dhigay, qeybna ka ah waxqabadka xukuumadiisa.
“Jidadku waxaa ay ka qeyb qaataan amniga dalka, jidkaan waxaa uu sidookale badalayaa isu-socodka gaadiidka iyo dadka waana muhiim” Ayuu yiri Madaxweyne Dr.Cabdiweli Gaas.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa tilmaamay in Puntland ay Gobolada Dalka Soomaaliya intooda badan kaga duwan tahay maanta nabad-gelyada iyo horumarka balaaran ee ka soconaya, shacabka Puntland waxaa uu ku booriyey in amnigooda ay adkaystaan.
“Horumarka iyo amnigu waa isku xiranyihiin , meel aan amni kajirin horumarna kama jiro marka amnigu waa furaha horumarka, cidkasta ayuuna xilka saaranyahay waana in si wadajir ah amniga looga wada shaqeeya” Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa sidookale sheegay in hirgelinta wadooyinka laamiga ah ay sidookale ka socdaan guud ahaan Gobolada Puntland, waana tallaabo lagu soo afjarayo baahida loo qabo in wadooyin laami ah laga hirgeliyo magaalooyinka Puntland.
“Waxaan ogahay in dadka Puntland ay yihiin dad soo dhaweyn fiican, waana dad ay dadka Soomaaliyeed oo idil u siman yihiin, dad badan oo Soomaali ah ayaana Puntland jooga kuna haysta nabad iyo nolol wanaagsan” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Shacabka Gobolka Gardafuul ee Puntland ayuu Madaxweyne Gaas ugu bishaareeyey in hada uu Gobolkaasi u diray koox qiimaynaysa waxa ku baxaya fulinta wado looga baxayo waddo xumida kajirta Gobolkaasi.
Inta badan Waddooyinka caasimadda Puntland ayaa laga wada dhigey kuwo laami ah muddadii uu xilka hayey Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Xasan: Haadi ayaan aqoonsanahay
Ximan & Xeeb oo u diyaargaroobay shirka G/dhexe